Weeraro Istish-haadiya Ah Oo Ka Dhacay Magaalada Gaalkacyo. – Calamada.com
Weeraro Istish-haadiya Ah Oo Ka Dhacay Magaalada Gaalkacyo.
calamada August 21, 2016 1 min read
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug ayaa sheegaya in weeraro culus oo qaraxyo ah ay ka dhaceen dhanka Waqooyi ee magaalada Gaalkacyo Halkaasi oo uu ka arimiyo maamulka Gaala raaca Puntland.
Weerarada oo Istish-haadiyo ah ayaa lala beegsaday xarunta dowlada hoose ee maamulka Puntland’iyadoona warar dheeraad ah ay kasoo baxayaan weeraradaasi.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in weerarada Istish-haadiyada ah ay fuliyeen ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin’iyadoona xilliga weerarada ay bilaabanayeen gudaha xarunta uu ka socday kulan u dhaxeeya xubnaha dowlada hoose ee maamulka Ashahaado la dirirka Puntland.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dhimashada ay ka badan tahay 15 ruux oo u badan saraakiil ciidan’ askar iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka dowlada hoose ee gaalara raaca Puntland’iyadoona dhaawaca ilaa iyo 30 ruux uu kor u dhaafaya.
Previous: Saraakiil American Ah Oo Lagu Qarxiyay Degmada Afgooye.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 18-11-1437 Hijri.